2013-05-26 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
Internet Download Manager IDM 6.15 Build 15 Full Version
IN Internet Download Manager - ON Saturday, June 01, 2013 No comments
IDM ကိုအားလုံးပဲ ရင်းနှီးနေကြမှာပါ အခု့လဲIDM update အသစ်လေးထွက်လာလို့ အချိန်မီ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သူမှာ Full Version အတွက် Patch ဖိုင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Patch ဖိုင် က တစ်ချို့သော Fre antivrius တွေနဲ့မတည့်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်
အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါ antivrius ခဏပိတ်ထာပေးပါ Full Version အတွက် Patch ဖိုင်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး ဆော့ဝဲလ်ကို install လုပ်ပါ။ install လုပ်ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Patch file ထည့်ပြီး ပြီးရင် Patch ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး Patch ကိုကလစ်လိုက်ပါ Patch ကိုကလစ်ပြီးရင်တော့Full Version အနေနဲ့ အသုံပြုလို့ရပါပြီခင်ဗျာ...
IN Recovery Software - ON Saturday, June 01, 2013 No comments
Hard Disk ကို Format ချမိလို့ဖြစ်စေ..Partition ခွဲမိလို့ဖြစ်စေ..Virus ကိုက်သွားလို့ဘဲဖြစ်စေ..Bad Sector တက်လို့ဖြစ်စေ..စတဲ့အကြောင့်ရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Data တွေပျောက်သွားရင် ပြန်လည် ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီ Software လေးကအကောင်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်
ဒါ့အပြင် MP3 ,4 ,Memory Stick ထဲက Data တွေ ပျောက်သွား..Format ချမိသွားရင်လည်း အကောင်းဆုံးအခြေအနေအထိ Data တွေကို Recovery ပြန်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းတဲ့
အသွင်အပြင်နဲ့အသုံးပြုရတာလဲလွယ်ကူတဲ့အတွက် လူတိုင်းအကြိုက်တွေ့မယ့် Data Recovery
Windows 8/7/Vista/XP/2000/Server 2008/2003/2000
Run " Regme" and merge it to system registry.
Done, E njoy.
IObit Malware Fighter Pro 2.0.0.204 Final Full key
IN Antivirus - ON Saturday, June 01, 2013 No comments
နာမည်ကြီး IObit Company ရဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Malware Cleaner Software ဖြစ်ပါတယ်..အင်တာနက် , Memory Stick တို့မှ ၀င်ရောက်လာတတ်တဲ့ Virus , Trojan ,Malware , Spyware , စတဲ့ ကွန်ပျူတာအဖျက်အမှောင့် များရဲ့ ရန်ကနေအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပြီးရှင်းလင်း
ဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..Antivirusကြီးတွေနဲ့တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ Internet Connection ပိတ်ပြီးမှ Serial Key ထည့်ပါ.. Software ကိုUpdate လုပ်မလားမေးရင် မလုပ်ပါနဲ့ခင်မျာ။
Okdo All to Pdf Converter Professional 4.9 Full Key
IN Converter - ON Saturday, June 01, 2013 No comments
PDF ဖိုင်ကနေ Word, Excel, PowerPoint, EPUB, HTML,Text ပြောင်းချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
IN Driver Software - ON Friday, May 31, 2013 No comments
Uniblue DriverScanner လေးကတော့ မိမိတို့ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို အလိုလျှောက် ရှာဖွေပြီး ဒေါင်းယူ Install ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးပါ မိမိစက်မှာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့
လိုအပ်ပါမယ်သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ပါ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းလေးကို အောက်မှာဒေါင်းယူသွားလိုက်ပါဗျာ..။
More about DriverScanner:
The bottom line is that this program does something that Windows Update promises to deliver on yet fails miserably at. DriverScanner keeps your system up-to-date
Better performance or your money back
DriverScanner replaces outdated drivers quickly and safely. If, for any reason, you are not pleased with our product, contact our customer support team within 60 days of purchase and we will refund the full purchase price.
Wondershare Video Converter Ultimate v6.5.0.5 Full Version With Crack
IN Converter - ON Friday, May 31, 2013 No comments
Wondershare ရဲ့ Product များကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် Wondershare Video Converter Version အသစ်ထွက်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...DVD တွေကို Rip လုပ်နိုင်သလို Burn နိုင်ပါ
သေးတယ်..ဒါအပြင် Audio အသံများကိုလည်း စိတ်ကြိုက်တည်းဖြတ်နိုင်သလို..Video များကိုလည်း စိတ်ကြိုက် Format အဖြစ်သို့ လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်..အခြားသော အသုံးဝင် Function များစွာလည်းပါဝင်တဲ့အတွက် တော်တော်လေးအသုံးဝင်မှာပါ..ဖူးလုပ်အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့ သူများအတွက် Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို crack file ထဲကဟာတွေကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
IN Video Editing - ON Friday, May 31, 2013 No comments
ဒါကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အပျော်တမ်း video editing သမားများ အတွက် video editing software ပါ။ ဖုန်းနှင့်ရိုက်ထားတာဖြစ်ဖြစ် camera နဲ့ အပျော်တမ်း ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် တည်းဖြတ်လို့ ရပါတယ်။ 80 MB ကျော်ကျော် လေးပဲ ရှိပါတယ်။ video editing စပြီး လေ့ကျင့်ချင်တဲ့သူ စမ်းချင်တဲ့သူများအတွက် ဒီကောင်လေးက အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး video တည်းဖြတ်ကြည့်လို ရပါတယ်။ ဖူးလုပ်အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့ သူများအတွက် Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို crack file ထဲကဟာတွေကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ ( 54 MB )
Download>>>fileswap (or) solidfiles (or) dropbox
IN Burning - ON Friday, May 31, 2013 No comments
IN Software, Utilities - ON Thursday, May 30, 2013 No comments
IN Antivirus - ON Thursday, May 30, 2013 No comments
IN Speed Up PC - ON Thursday, May 30, 2013 No comments
IN USB, Utilities - ON Wednesday, May 29, 2013 No comments
IN Burning - ON Wednesday, May 29, 2013 No comments
IN pdf - ON Wednesday, May 29, 2013 No comments
IN Speed Up Browser, Speed Up Internet, Speed up window, System Cleaner - ON Tuesday, May 28, 2013 No comments